Translate Kazakh to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Kazakh to Myanmar (Burmese), Kazakh to Myanmar (Burmese) translations, Kazakh to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
Сәлеметсіз бе қалайсыз မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
Біреу бар ма? မည်သူမဆိုရှိပါသလား?
Мен сізді өте жақсы көремін ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
Бұл гамбургер қанша тұрады? ဒီဟမ်ဘာဂါဘယ်လောက်ကုန်ကျသလဲ,
Сіз маған такси деп айта аласыз ба? သငျသညျအကြှနျုပျကိုတက္ကစီခေါ်ခြင်းနိုင်သလား?
Мені қызықтырады ငါစိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းကို
Менің ұшуым кешіктірілді အကြှနျုပျ၏လေယာဉ်ခရီးစဉ်နှောင့်နှေးခဲ့သညျ
Мен бизнес үшін осындамын ငါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဒီမှာဖြစ်ကြောင်းကို
Сәлем менің атым မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
Кешіріңіз, бірақ мен тұрмын ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
Мен сізден сұрағым келеді ငါသည်သင်တို့ကိုမမေးချင်ပါတယ်
Сіз мені әуежайға алып барасыз ба? သငျသညျလေဆိပ်ကိုငါ့ကိုယူနိုင်သလား?
Қазір қандай уақыт, өтінемін? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
Ең жақын полиция бөлімшесі қай жерде? အနီးဆုံးရဲစခန်းဘယ်မှာပါလဲ?
Телефонды зарядтаушыға қарыз аламын ба? ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
Сен маған көмектесе аласың ба? ကျွန်တော့်ကိုကူညီပေးလို့ရမလား?
Маған сусын тапсырыс берсеңіз? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
Ол қанша тұрады? ဒါဘယ်လောက်ကုန်ကျလဲ?
Мен глютенге аллергиямын ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
Дәрігерді шақырыңыз ဆရာဝန်ခေါ်ပါ
Дәрігер бар ма? ဆရာဝန်တစ်ဦးရှိပါသလော
Қоңырау шалуға болады ма? ငါဖုန်းခေါ်ရနိုင်မလား?
Боссаңызды маған қоңырау шалыңыз. ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။
Бұл орын өте жақсы ဤအရပ်ဌာနကိုအလွန်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည်
Маған қонақүйге алып барыңыз ဟိုတယ်မှငါ့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးယူပါ
Бөлме нөмірі қандай? အခန်းထဲမှာအရေအတွက်ကဘာလဲ?